गुल्मीको रेसुङ्गा बिमान स्थलमा आज शुक्रबार पहिलो पटक बिमानको परीक्षण उडान सम्पन्न ! – ebaglung.com
गुल्मीको रेसुङ्गा बिमान स्थलमा आज शुक्रबार पहिलो पटक बिमानको परीक्षण उडान सम्पन्न !
२०७५ जेष्ठ २५, शुक्रबार २०:५५	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ जेठ २५ । गुल्मीको रेसुङ्गा विमान स्थलमा आज पहिलो पटक जहाज अवतरण भएको छ । १८ सिट क्षमताको तारा एयरको जहाज परिक्षण उडान स्वरुप आज दिउँसो ३ वजेर ५५ मिनेट जाँदा अवतरण भएको हो । विहान देखि जहाँज आउँदै छ भन्दै कुर्दै बसेकाहरु जहाज आउन साथ चिच्चाएर हुटिङ्ग गरेर भन्दै थिए– जाहज आउँदै छ हैन, आई सक्यो….’ त्यस पछि थप हाँसो र हुटिङ्ग चर्किएको थियो ।
रेसुङ्गा विमान स्थलको जहाज उडानको शुभारम्भ नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले भव्य समाराहेका विच गरेका हुन । संयोग उनि २०६३ साल असार २५ गतेका दिन ज्ञवाली संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्नमन्त्री छँदा शिलान्यास पनि आफैले गरेका थिए ।
उति वेला मन्त्री भएको एक महिना मै गुल्मीमा विमान स्थलको योजना पारेका मन्त्री ज्ञवालीले अहिले विमान स्थलको परिक्षण उडान पनि यसपाली मन्त्रालय सम्हालेको छोटो समय मै गराउन सफल भएका छन् ।
समारोहलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले आजको दिन आफ्नो मात्रै नभएर सवै गुल्मेली र यस आसपासका जिल्लावासीको खुशीको नि भएको भन्दै बधाई दिएका थिए । आफु मन्त्री भएर होचुवाको भरमा रेसुङ्गा विमान स्थल आफुले प्रशस्त अध्यान गरी धार्मिक तथा अन्य पर्यटकहरुको प्रशस्त सम्भावना देखेर योजना पारेको बताएका थिए ।
साथै मन्त्री ज्ञवालीले कालीगण्डकी कोरिडोर चीन हुँदै भारत आवत जावत गुल्मीबाटै हुने र हालै सरकारले मदन भण्डारी लोक मार्ग पनि गुल्मी हुँदै पुर्व पश्चिम आवत जावन हुने भएकोले अव गुल्मीले विकासको बेग्लै गति लिने दावी गरे ।
परिक्षण उडान अघि नै हेलिक्पटमा सोही विमान स्थलमा ओर्लेका मन्त्री ज्ञवाली शुभारम्भ समारोहलाई सम्वोधन गरी दिउँसै फकेका थिए । भोलि आफु एशिया स्तरको थिङ्ग ट्याङकरहरुको सम्मेलनमा भाग लिन ईन्डोनिशया जानु पर्ने र आजै केहि मुलुकका राजदुत संग भेटघाट गर्नु पर्ने भएको जनाउँदै अवेर सम्म पर्खिदा पनि मौसम सफा नभएका कारण उनि परिक्षण उडान नहुदै फर्किएका हुन ।
देशभर ५२ औं विमान स्थलका रुपमा रेसुङ्गा विमान स्थल बनेको र सवै भन्दा छोटो समयमै परिक्षण उडान भएको सोही विमान स्थल भएको नेपाल नागरिक उड्यन प्रधिकरणका महाप्रवन्धक समिर गौतमले बताए ।
उनले जति सक्दो छिटो ग्रावेलिङ्ग टावर लगायका वाँकी काम सकेर नियमित उडानको ब्यवस्था गरिने प्रतिवद्धत्ता समेत जनाएका छन् । गुल्मी मै घर भएका शसस्त्र प्रहरीका महानिरक्षक शैलेन्द्र खनालले आफु अत्यन्तै हर्षित भएको बताएका थिए ।
त्यस्तै चन्द्रगिरी केवलकार संञ्चालक चन्द्र ढकालले रेसुङ्गा विमानस्थल संगै गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासबाट माथी प्रशिद्ध तपोमुमी रेसुङ्गा धार्मिक क्षेत्रमा केवुलकार सञ्चालन गर्न मन्त्री ज्ञवालीको आग्रहमा आफु गुल्मी आएको र अव छिट्टै सम्भाव्यता अध्यान हुने जानकारी दिए ।
उनले केवुलकार सञ्चालनका लागि जमिन प्रशस्त चाहिने र त्यसमा स्थानियको सहयोग सम्वन्व्यको जरुरी हुने भएकोले त्यसमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
रेसुङ्गा विमान स्थल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले हाल सम्म १४ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँको खर्च विवरण पेश गरेका थिए । विमान स्थल निर्माण कार्य यहाँ सम्म ल्याउन परिकल्पनाकार मन्त्री ज्ञवाली सहित सवै पक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए । विमान स्थल सहयाक आयोजना प्रमुख दिनेश नेपालीका अनुसार हाल परिक्षण उडानका लागि ३० प्रतिशत अस्थाई सर्भिसको काम मात्रै भएको बताए ।
उनले भने–‘ नियमित उडानका लागि सवै भन्दा पहिला ग्रावेलिङ्ग हुनु पर्ने । त्यस पछि कन्ट्रोल टावर र ट्रमिनल भवन लगायतका आवश्यक संरचना बन्नका लागि अझै ४५ करोड जति खर्च आवश्यक छ । उनले थपे समस्या भनेको वजेट कै हो, सरकारले जति सक्टो छिटो दिन्छ उति छिटो काम सकिने छ ।
पोखराबाट जहाज लिएर आएका क्याप्टेनहरु सन्तोश शाह, प्रभाकरण शाह लगायतको टोलीलाई विमान स्थल उपभोक्ता समितिले स्वागत सम्मान गरेका थिए । उनिहरुले त्यहाँबाट २० मिनेटमा आई पुगेको बताए । कच्ची विमान स्थल भए पनि पानी आएको समय बाहेक नियमित उडान गर्न सकिने बताए । काठमाण्डौ पुग्न यातायातमा १२ घण्टा समय लाग्ने गुल्मेलीहरुले अव जम्मा ४५ मिनेटमा काठमाडौ पुग्ने छन ।
यस विमान स्थलमा नियमित सेवा सुरु भए पछि छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची , प्युठान , पाल्पा, बागलुङ, पर्वत सम्मका जनताहरु लाभान्वित हुने छन् । २०३६ साल देखि त्यहाँ विमान स्थलको चर्चा चलाईए पनि कसैले अगाडी बढाउन सकेका थिएनन । २०७० सालमा कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी जिते पनि त्यहाँ उनले एक पैसा रकम नहाले पछि अलपत्र परेको थियो ।
जिल्ला समन्व्य समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले आजको दिन आफ्नो राजनैतिक जिवनमा सवै भन्दा ठुलो खुशीको दिन भएको प्रतिकृया दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशलराज शर्माले गौरमय दिन भएको बताए । सवै राजनैतिक दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले मन्तव्य राखेका थिए ।
निर्मँण समितिका पुर्व अध्यक्ष पदम अर्यालले २०७० मा निर्वाचित मानियहरुले एक पैसा यसमा नछुट्टाई दिदा अलपत्र परेको र अहिलेको सांसद , मन्त्रीहरुले वजेट पारी दिए पछि यहाँ सम्म आउन सफल भईएको बताए । हर्षित हुँदै पुगेकी सिमिचौरकी ७४ वर्षिया बृद्धा भुमिकला पाण्डेले आफु जाहजमा चढेर छोरालाई भेटन काठमाण्डौ जाने ईच्छा जाहेर गरेर विहानै उठेर हेर्न आएको बताईन ।
गाउँमा जहाज आउने खुशीयालमा स्थानियले नाच खान गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष पन्थको सभापतित्वमा सम्पन्न कायक्रमा उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीको स्वागत मन्तव्य र सचिव अशोक थापा–(मुक्ति ) सञ्चालन रहेको थियो । ढिलो भएको भन्दै केहि दिन अघि सम्म मन्त्री ज्ञवालीको ब्याङ्ग गर्दै विपक्षीहरुले आकासमा उडेको चिलको फोटो खिचेर फेशबुकमा पोष्ट गर्ने गरेका थिए ।
देविस्थान माविको ५९ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न: एकै बर्षमा ६० लाख बढि चन्दा संकलन !
जैमिनीका विभिन्न बिद्यालयहरुमा छात्रबृत्ती एवं शैक्षिक सामाग्री वितरण !